Ebumnuche 4 Maka Ihe Nkịta Ji eri Egwu & Ihe Do Ga-eme Banyere Ya - Ahụike
Ebumnuche 4 Maka Ihe Nkịta Ji eri Egwu & Ihe Do Ga-eme Banyere Ya
Ọ bụrụ n ’ị lere anya n’otu akwụkwọ a na - enyocha ọfụma n’ebe a na - eri ahịhịa n’ime nkịta, imirikiti n’ime ha na-ekwu ihe mere n’oge gara aga, ma e wezụga nkịta na-etinye nkeji atọ na anọ kwa ụbọchị na-eri ahịhịa, amachaghị banyere ya.
Ọtụtụ ndị nwe nkịta ahụla ka nkịta ha na-ata ahịhịa , ma daa mkparịta ụka anyị na anụ ụlọ anyị, anyị enweghị ike ịkọwapụta ihe kpatara ya.
Nkita g’eri ahihia. Mgbe ụfọdụ, ha ga-agbọ agbọ mgbe e mesịrị, na mgbe ụfọdụ ha agaghị. Nke a bụ ebe ọtụtụ ndị na-atụ aro na ịta ahịhịa bụ ụzọ iji belata ahụ erughị ala.
Fọdụ na-arụ ụka na-ahụ ahịhịa dị ka isi iyi nkịta. Ma, nke a bụ n'ihi na nghọtahie ndị mmadụ na-ekwukarị na nkịta na-eri ahịhịa adịghị edozi ahụ.
N’isiokwu a, anyị na-akọ akụkọ ifo ụfọdụ banyere ihe kpatara nkịta ji ata ahịhịa, kesaa ụfọdụ ihe kpatara ihe nwere ike ime omume a, ma nye ụfọdụ ndụmọdụ ihe ị kwesịrị ime banyere ya.
Kedu ihe kpatara nkịta ji ata ahịhịa?
1. Ahụ erughị ala ma ọ bụ Ọrịa
2. Ha Enweghi Ihe Oriri
3. Agụụ Na-agụ Gị Nkịta
4. Ndi Nna Ochie Ha Bụ Ndi Ahịhịa
Iri ahihia odi nma nye nkita?
Zụ Nkịta Iji Kwụsị Iri Ezie?
Ikwesiri I Gaa na Vet Mgbe Nkita Gi Richa ahihia?
Jack Russell Terrier Iri Ezie
Otu ọmụmụ nyochara nkịta na-eri ahịhịa. Ndị nkịta niile na-ekere òkè n'ọmụmụ ihe a nwere nyocha ahụike zuru oke nke onye dọkịta na-agwọ ọrịa. Ha niile weere na ahụike dị mma (na-agbasasị kpamkpam na enweghị nsogbu ọ bụla achọpụtara).
N'ime nkịta iri na abụọ nke na-eme ihe ọmụmụ ahụ, ihe iri asaa na iri na-eri ahịhịa mere naanị sọsọ ihe ise na-esochi.
Na-enweghị nsogbu ahụike na nkịta, yana ọnụọgụ ole na ole, ọmụmụ ahụ enweghị ihe akaebe iji jikọta ọnụ ọgụgụ nke ahịhịa na-eri ihe na ọrịa ma ọ bụ ahụ erughị ala nke nri.
Echiche ụgha nke erughị ala ma ọ bụ ọrịa na-akpata nkịta ka ha rie ahịhịa ka dị mkpa, ebe ọ bụ na ụmụ mmadụ na-echetakarị ihe ndị na-eme ka ọ ghara imegharị ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ahịhịa na-eri nri.
Ihe ọzọ a na-ahụkarị maka ihe kpatara nkịta ji ata ahịhịa bụ site na enweghị otu ihe na-edozi ahụ (yabụ, ịnweta ma ọ bụ vitamin).
Otú ọ dị, enweghi obere ihe akaebe iji kwado echiche ahụ bụ na nkịta na-eri ahịhịa iji nweta ihe ndị dị mkpa ha na-anaghị enweta site na ụdị nri ha.
Mgbe a na-amụ ya, ọ nweghị ihe gosiri na nkịta na-eri nri tebụl, nri azụmaahịa ma ọ bụ nri nri nwere ike ịdị ma ọ bụ obere eri ahịhịa .
Agbanyeghị, nri ndị ahụ niile ka hụrụ nkịta na-eri ahịhịa!
Ndi ahihia bu ebe nkita na enweta nri?
Ọ bụrụ na e were ya dị ka ebe nri si enweta nri, yabụ dịka nri a na-eri nri ma ọ bụ n'okporo ámá, ọ̀ nwere ike ibute ọrịa mgbe ụfọdụ?
Mgbe ị na-atụle ole nkịta ahịhịa na-eri na mgbe, o doro anya na nkịta na-ata ahịhịa karịa nri nri ha.
Ha na-erikarị ahihia nke ụtụtụ (ọtụtụ ihe ndị edere na ọmụmụ bụ n'ụtụtụ). Ka ụbọchị na-aga n’ihu gbasara nke puru omume nke omume a na-ebelata (ya bụ na ha nwere ike iwepụ obere oge ịta ahịhịa ka ụbọchị na-aga n’ihu).
Data nwere ike na-atụ aro na ịta ahịhịa bụ naanị nzaghachi agụụ. Dika a na-enweta ahihia ebe nile, o bu uzo nri di mfe.
Ekwesịrị ikwenye na nkwupụta a mgbe ị tụlere sayensị na-akpata ọrịa ọgbụgbọ. Ọrịa na-efe efe na-apụta na afo efu. Nkịta na-eri ahịhịa n'ihi na agụụ na-agụ ya nakwa n'ihi na enweghị ihe oriri dị ukwuu, ọgbụgbọ ahụ na-ama jijiji na-eme na agbanyeghị.
Sugar ọdịnaya na ahịhịa na-abawanye ofụri usen dị ka photosynthesis na-eme, mgbe ahụ ma ọ bụrụ na enwee okpomọkụ dị ala n'abalị, sugar ndị echekwara anaghị enweta maka uto ma wee dị elu. Ọdịnaya shuga nke ahịhịa nwere ike imetụta ihe omume na nkịta.
Omume a na-eri ahihia bu ihe eburu pụta ụwa ketara n'aka ya nna ochie canid nna nna .
Ekwenyere na ịsacha na ahịhịa bụ ụzọ dị irè iji chịkwaa nje ndị na-eme eriri afọ.
Ngwongwo ihe ọkụkụ na-agabiga eriri afọ, na-ejikọ ikpuru. Ka ọ na-agafe traktị ahụ, ọ na-ebu ikpuru.
Nnyocha e mere egosiwo na nkịta anaghị ata ahịhịa n’ihi na ha nwere ikpuru. Agbanyeghị, nkịta anyị na-egosi naanị omume sitere n'aka ndị nna nna ha.
Enweghị ihe akaebe ruo taa na-egosi ihe ọ bụla na-edozi ahụ ma ọ bụ ọrịa metụtara ihe kpatara ahịhịa na-eri nkịta.
Nkọwa kachasị dị na ya bụ omume e ketara eketa. Nkọwa nke abụọ bụ na ọ nwere ike bụrụ nri dị mfe maka nri ndị anyaukwu na-eri ihe .
Na-eto eto mbuaha na-eri ahịhịa.
Ọ bụrụ na nkịta gị nọ n'ime izugbe dị mma , mgbe ahụ ahịhịa ya riri ka o yighị ka ọ ga-echegbu onwe ya. O yighị ka ihe ọ bụla kpatara ya na-akpali omume a. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ọgba aghara na-adị oge niile, mgbe ahụ ọ bara uru ịga hụ dọkịta gị ka ị chịkwaa nsogbu ahụike ọ bụla.
Iri ahihia adighi nma na nkita .
Ọ bụ ezie na ụfọdụ nkịta na-agbọ agbọ mgbe ha riri ahịhịa, ọ ga-abụ na ọ ga-enwe mmetụta dị njọ na-adịte aka na ahụike ha.
Okwu na-ebilite mgbe nkịta na-ata ahịhịa nke ejiri ọgwụ na kemịkal, ma ọ bụ na-eri ụfọdụ osisi na-egbu egbu. Ọtụtụ ahịhịa ahihia na-enye anụ ụlọ obere ihe egwu, belụsọ glyphosate (ngwaahịa a na-ejikarị achịkwa ahịhịa).
Mkpughepu na Ọrịa glyphosate nwere ike ibute agbọ, afọ ọsịsa na ike ọgwụgwụ.
I nwekwara ihe ize ndụ nke osisi na-egbu egbu nke na-ejedebeghị na, mana gụnyere:
Osisi na-egbu egbu na nkịta
Nkwụ Sago Tomato Osisi Aloe Vera Osisi
Amaryllis Gladiola Onye America Holly Daffodil
Ume nwa Milkweed Agwa Bean Azalea / Rhododendron
Tulip Chrysanthemum Begonia Oleander
Ọ bụrụ na ị na-echegbu na nkịta gị eriwo ahịhịa na-egbu egbu, chọọ ndụmọdụ ụmụ anụmanụ ozugbo.
E nwere esemokwu na nkịta na-eri ahịhịa n'ihi na agụụ na-agụ ha, n'ihi ya ị nwere ike ịmalite site na ịgbanwe oge nri nke nkịta gị. Hụ ma ha belata omume a Mgbe ị na-enye ha nri ụtụtụ. Nkịta gị ọ ga-erite uru site n'inwekwu nri, obere nri ụbọchị niile?
Ọ bụrụ na ị na-eche na nkịta gị nwere ike iri ahịhịa ejiri ọgwụ ma ọ bụ banye na osisi ndị na-egbu egbu, ụzọ kachasị mma iji kwụsị ya bụ ilekọta anya mgbe ọ bụla ọ nọ n'èzí. Ọ bụrụ na ọ nwaa iri ahịhịa ahụ, dọpụ uche ya ma nyeghachi ya ụgwọ ọrụ.
Iche iche na nke a ị nwere ike ịkụziri ya iwu ịhapụ . Mgbe ahụ, mgbe ọ na-eduga maka ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa, ị nwere ike ịgwa ya ka ọ hapụ ya.
Achingkụzi Ahapụ iwu
Malite na ọgwụgwọ na aka mechiri emechi
Nkịta gị nwere ike ịmị ya
Chere ka o leghaara ọgwụgwọ ahụ anya ma ọ bụ tụgharịa isi ya
Ozugbo o mere, nye ya ọgwụgwọ
Ka ọ na-eleghara ya anya, kpọọ omume ahụ, pụọ!
Tinyegharịa ọtụtụ oge na gburugburu ebe dị iche iche
Nwere ike ịga n'ihu gaa:
Inwe ọgwụgwọ na aka imeghe ma gwa nkịta gị ka ọ pụọ
You nwere ike ịnye ọgwụgwọ na ala, ma ọ bụ n'otu akụkụ nke ụlọ ahụ iji wuo na iwu ahụ
Cheta inye ya ọgwụgwọ ozugbo o leghara ya anya ma jiri nwayọ mụbaa oge dị n’etiti ị na-arịọ ya ka ọ pụọ.
Hound nkịta na-ata ahịhịa.
Ọ bụrụ na nkịta gị na-arịa ọrịa mgbe niile mgbe ị na-eri ahịhịa, ha na-ewepụkwa ihe karịrị ahịhịa, mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị nleta ị ga-ahụ dọkịta gị.
Veterinarian nwere ike ịme nlekọta ahụike zuru oke ma ozugbo ị matara na ọ nọ ezigbo ahụike , I nwere ike iche obere ntakịrị nchegbu gbasara ahihia ya na-eri nri.
Ọ bụrụ na nkịta gị na-egosi mgbaàmà ndị ọzọ dị ka afọ ọsịsa, ike ọgwụgwụ, ma ọ bụ nsogbu iku ume mgbe ha richara ahịhịa, enwere ike ịmịnye kemịkal na-egbu egbu ma ọ bụ osisi na-egbu egbu. Kwesịrị ịchọ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ anya ozugbo.
Enwere obere ihe akaebe sayensị na-egosi ihe ọ bụla na-edozi ahụ ma ọ bụ ọrịa metụtara ihe mere nkịta ji ata ahịhịa; o yikarịrị ka ọ bụ na ọ bụ naanị ebe ndị nri anyaukwu na-eri nri.
Kedu ihe kpatara nkịta ji agbọ agbọ mgbe ha riri ahịhịa enwere ike ịkọwa ya n'oge ha na-eri ahịhịa. Nkọwa ọzọ nwere ike ịpụta bụ na ọ bụ naanị omume e ketara eketa maka njikwa nje.
Nchegbu bụ mgbe nkịta na-ata ahịhịa ahịhịa ma ọ bụ osisi na-egbu egbu .
Ọ bụrụ na ị na-eche na nkịta e nsi gị nri site na-eri ahịhịa, mgbe ahụ, na-achọ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ anya ozugbo.
Miniature Husky: Ihe Know Ga-amata Banyere Mischievous Mini Huskies
Ntuziaka Pomeranian Teacup: Ihe Knowmara Tupu yingzụta
kedu ka nwa nkita ga -esi buru ibu
nwa nkịta chocolate lab pit mix
jack russell chihuahua mix ndụ
ọlaedo retriever cocker spaniel mix puppy
agba aja aja na -acha ọcha ogologo chihuahua